Tsy maintsy misy mamy ao anatin’ny mangidy – Blaogin'i Voniary
Tsy misy fanaintainana sy fijaliana lalina mihoatra noho an’ny vehivavy mihetsi-jaza fa ny valiny avy eo kosa dia ilay fanomezana sarobidy sy mamy indrindra: ilay sombiniaina. Azo itarafana ny fiainana iray manontolo izany: MISY HEVINY NY FIJALIANA, MISY VALINY NY FAHARETANA. Raha misy sedra na fotoan-tsarotra iainanao dia misy hafaliana, fahasoavana ary fandresena ao ambadika ao, fa ny angatahana aminao kosa dia ny faharetana sy ny fanantenana. Tsy honohono io fa tena marina! Araho ange ny zavatra niainan’I Eric Manana e, vakio tsara ange ny fahendrena fonosin’ny voan’aviavy sy ny angivy e!
Tantaran’i Eric Manana
I Eric Manana, iny mpihira malaza fantatrao iny dia tsy nieritreritra ny ho mpihira akory raha tsy nandalo sedra mafy. Atleta, efa tompon-dakan’i Madagasikara tamin’ny “saut en longueur” izy tamin’ny fahakeliny. Niharan’ny loza anefa izy, tapaka ny tongony tamin’izany ka tsy afaka nanohy ny fanatanjahan-tena intsony. Hakiviana moa tamin’izany! Alahelo moa tamin’izany! Nanomboka teo anefa izy no nitodika tamin’ilay talenta hafa iray nananany dia ny hira. Notrandrahany, novoiziny ary nilofosany io taletany io ka izao izy tonga mpanakanto fanta-daza maneran-tany ary mitondra avo ny anaran’ny nosintsika izao.
Tonga amin’izao toerany izao ve izy hoy ianao raha tsy tratran’iny loza nahavoa azy iny? Tsia! Iny no NAMOHA NY HAMBOM-PONY ka nitozoany araka izay tratrin’ny heriny tamin’ny zava-kanto. Izany hoe: nisy dikany sy VOKA-TSOANY ILAY MAFY NOLALOVANY.
Voan’aviavy sy angivy
Tsy adaladala ny Ntaolo Malagasy raha nilaza hoe: “AO ANATIN’NY MANGIDY NO AHITANA NY MAMY”. Ny voan’aviavy no ohatra azo tsapain-tanana manamarina io ohabolana io. Ny voan’aviavy manko raha vao atao am-bava dia tsy misy mangidy toa azy, saingy mamy fara kosa izy. Misy namana iray izay aza nilatsa-dranomaso mihitsy teo am-pitsetsefana azy ary efa saika handoa mihitsy fa tsy tantiny intsony ny gindin’ilay voankazo. Noraranay anefa izy sady nankaherezinay hanohy ihinana fa efa akaiky ny mamy. Teo izy vao gaga sy faly rehefa nahatsiaro hamamiana tao am-bavany.
Ny amin’ny angivy indray, mangidy tena mangidy, tsy misy tsiro mamy andrasana aminy. Tsy misalasala mihitsy anefa ny renim-pianakaviana manao ron’angivy na mampifangaro azy amin’ny sakafo hafa satria mahasalama izy ireny: mahatsara vavony, manasitrana “goutte”, “rhumatisme” sy ny maro hafa. Izany hoe, mila fiaretana ny ngindiny eo am-pihinanana azy mba hananana vatana salama avy eo. DIDY MASO ASIAM-PANAFODY, hono e, MAHARETA FA HANANA NY SOA.
Ny lesona azo tsoahina dia izao: tsy maintsy misy mamy ao anatin’ny mangidy. Mety toy ny amin’ny voan’aviavy ny mamy, tonga dia tsapa ny tsirony. Mety ho toy ny amin’ny voangivy koa anefa, miafina ao anatin’ny voka-tsoany ny maminy. Koa raha misy sedra, alahelo, loza na fotoan-tsarotra lalovanao, EZAHO HATRANY NY MAMANTATRA IZAY ZAVA-TSOA ATERAK’INY, mety ho tonga dia hita maso mivantana fa mety misy heviny lalina saro-takarina. Koa AZA KIVY fa mahereza dia mahareta.
aza kivy, Eric Manana, faharetana, fijaliana, fijery miabo, tantaran'i Eric Manana, voan'aviavy
RANARIVELO Roël: “Aleoko tsy mihinan-kanina toy izay tsy mividy boky”
2 commentaires sur “Tsy maintsy misy mamy ao anatin’ny mangidy”
vehivavytsara dit :
14 octobre 2017 à 5 h 01 min
Manarakamoramora ato aho an…tena tsy tafavoaka mihitsy aho amin’ny fandaminanana fotoana…mafy be ilay fanambiko amin’ity taom-pianarana 32017-2018 ity fa manala CEPE ny zanako iray… Mankasitraka akia…tahaka ny hoe mahita ahy ho tonga amin’ilay Zanahary ahy aho. Tsy mora ilay mitraka avy ao anaty sarotra…tsy mora…fa tsy irery ny tena manana an’i blaogin-dry. Samia mahery
2017-10-10 14:21 GMT+02:00 Blaogin’i Voniary :
> voniary posted: « Tsy misy fanaintainana sy fijaliana lalina mihoatra noho > an’ny vehivavy mihetsi-jaza fa ny valiny avy eo kosa dia ilay fanomezana > sarobidy sy mamy indrindra: ilay sombiniaina. Azo itarafana ny fiainana > iray manontolo izany: MISY HEVINY NY FIJALIANA, MISY » >
18 octobre 2017 à 10 h 15 min
Faly ny tena rehefa misy manaraka toy izao ny blaogy! Mankasitraka ô! Mifanohantohan-tsy ho lavo eto isika e!